SPM News: Somali 5.5.22
Published May 5, 2022 at 10:01 AM CDT
﻿Laba toddobaad gudahood, dadka reer Iowan waxay bilaabi karaan codbixinta doorashooyinka hordhaca ah ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee sanadkan. Codbixiyayaashu waa inay isu diiwaan galiyaan sidii Jamhuuri ama Dimuqraadi si ay uga qaybgalaan.Kuwa raba inay ku codeeyaan boostada waa inay soo gudbiyaan codsi qoraal ah oo loogu talagalay warqadda codbixinta ee boostada ah. Codsiga waa inuu helaa hantidhawraha degmadaada 5 galabnimo 23-ka May.May 18-keeda waa maalinta koowaad ee hanti-dhawrayaasha degmadu ay u diri karaan warqadaha cod-bixiyayaasha.
Xisbiga Dimuqraadiga ee Iowa ayaa warqad u gudbiyay D-N-C isaga oo codsanaya in guddiyada Iowa ay ku sii nagaadaan marka hore qaranka si ay u doortaan musharrax madaxweyne.D-N-C ayaa furay jadwalka magacaabista madaxweynaha waxayna ka codsanaysaa dawlad-goboleedyada inay codsadaan xilli hore oo ay dacwadooda soo gudbiyaan.
Gubashada furan ayaa mar kale loo ogol yahay Degmada Woodbury, laakiin dadka degan Magaalada Sioux waa inay weli helaan ogolaansho ay sidaas ku sameeyaan. Xayiraadii gubatay ee gobolka ayaa saaka laga qaaday.
Badbaadinta Dabka ee Magaalada Sioux ayaa sheegtay in gubashada furan ee gudaha xadka magaalada aan la ogolayn iyada oo aan ogolaansho laga helin xafiiska dab-damiska ee magaalada. Ogolaanshuhu waxa uu oggol yahay gubashada laamo, laamo yaryar, iyo qashinka muuqaalka oo keliya.
$2 milyan oo deeq federaal ah ayaa u oggolaan doonta Jaamacadda Briar Cliff inay dib u cusboonaysiiso Toller Hall oo ay ku darto garab tacliimeed cusub oo hoy u noqon doona dhammaan barnaamijyadeeda sayniska daryeelka caafimaadka. Deeqdan waxaa maalgeliyay Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka.Iyada oo qayb ka ah mashruuca, Briar Cliff waxa uu abuuri doonaa Dugsiga Caafimaadka iyo Sayniska Caawinta ee Xirfadlayaasha Caafimaadka, xarun tababbarka shaqaalaha daryeelka caafimaadka.